Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Xasan Agoon Ku Dilay Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Xasan Agoon Ku Dilay Muqdisho.
Saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka waxey gudaha degmada Yaaqshiid ku dileen Arday Somaliyeed’iyadoona faahfaahino dheeraad ah ay kasoo baxayaan dilka ardayga.
Maleeshiyaatka dowlada waxey ardaygaan fiidkii hore ee xalay ku dileen xaafadda Carafaat gaar ahaan wadada gasha Qabuuraha Barakaat’waxaana ardaygaan dilay maleeshiyaatka dowlada Ridada kuwa fariisinka ku leh Daarta Qabyada.
Ardaygaan maleeshiyaatka dowlada federaalka ay ku dileen xaafadda Carafaat ayaa lagu magacaabi jiray Xasan Agoon’waxaana uu ahaa arday si aad ah looga yaqaanay xaafadda Carafaat oo ka tirsan degmada Yaaqshiid.
Dilka ardaygaan waxa uu kusoo aadayaa xilli maalintii shalay sidoo kale maleeshiyaatka dowladda Ridada federaalka wiil dhalinyaro ah ay ku dileen degmada Afgooye oo ka tirsan gobalka Shabeelada hoose.